UMaitri Jha - ALinks
umbhali: UMaitri Jha
January 17, 2022 UMaitri Jha isifundo, Uganda
Ngaba uzimisele ukufunda eUganda ?? Yindawo elungileyo yokufunda njengomfundi wangaphandle. Kuba malunga nama-700, abafundi baseMelika bafunda eUganda nyaka ngamnye. Masiqale sazi ngakumbi ngeUganda: I-Uganda yaziwa ngokusemthethweni
January 16, 2022 UMaitri Jha Norowe, isifundo
Iindleko zokuphila eNorway ziphezulu. Nangona kunjalo, ukufunda eNorway kungangabizi njengoko ucinga. Njengoko iiyunivesithi kunye neekholeji zingabizi iifizi zokufunda zabafundi bamanye amazwe. Iiyunivesithi zaseNorway zikwabonelela ngemfundo esemgangathweni. Kwakhona, ufunda eNorway
Iindawo zokutyelela eUzbekistan
January 15, 2022 UMaitri Jha izinto zokwenza, Uzbhekistan
I-Uzbekistan yiriphabliki yangaphambili yeSoviet kunye nelizwe elikuMbindi weAsia. Idume ngeemosque zayo kunye neemausoleums. Ineendawo ezinxulumene neSilk Path, indlela yorhwebo yakudala yaseTshayina-yeMeditera. Uphawu oluphawulekayo lwezakhiwo zamaSilamsi lufumaneka
1 2 3 ... 24 I zithuba ezilandelayo»